Nichlos Kay oo Ka walaacsan Xiisadaha Dagaal Ee Somalilad iyo Puntland U dhaxeeya. – idalenews.com
Nichlos Kay oo Ka walaacsan Xiisadaha Dagaal Ee Somalilad iyo Puntland U dhaxeeya.
Ergaygga Gaarka ah ee Qaramadda Midoobay u qaabilsan Arrimaha Soomaaliya, Nikolas Kay ayaa dareen ka muujiyay shaqaaqadda ka dhexdhalatay ciidamo ka socda Soomaaliland iyo kuwo ka socda Puntland, oo ku murunsan Gobolka Waqooyi ee Sool, gaar ahaan magaaladda Taleex.
“Waxaan ku baaqayaa in la muujoy dheganaansho. Xaaladda laguma xalin karo hab ciidan. Dhamaan dhinacyada ay arrintu khusayso waa in ay muujiyaan dulqaad, kuna kicin ficil keeni karo dagaal. Waana in ay sida oogu dhakhso badan u damiyaan buuqa jira/ ama u qaboojiyaan xaaladda”.
Waana in ay ku xalliyaan arrimahoodda si ay ku dheehantahay xasilooni, nabad iyo isu tanaasulid.
Nichlos Kay ayaa yiri “Dadka Soomaaliyeed way soo dhibtoodeen in kufilan, waxayna ogyihiin in wax wanaag ah aan lagu gaareeynin dagaal iyo amni la’aan.”
Ugu dambeyn Xafiiska UNSOM iyo Bulshada Caalamka ayaa labaduba ku baaqaayo in la muujiyo dulqaad aad u weyn. Waxaan diyaar u nahay inaan dhinacyada ka taageerno wixii dhexdhexaadin ah” ayuu yiri Egreyga Gaarka ah.
Wariye Colombo”Ma Maanta ayey gaareen Kenya iyo Ethiopia iney Soomaalida Albaabada kasoo xirtaan ( Qormo Xiise leh ).
Ragga qaadka cuna ee degan Magaalada Muqdisho oo qaarkood bilaabay in qaadka laga keeno Kenya ay iska daayaan.